ကျောက်ဆောင် … ပင်လယ်…နှင့် မိန်းကလေး… | Layma's World
Filed under: Pieces, Traveling | Tagged: Features |
« ဆန္ဒ ဟောတော့.. »
nu-san, on April 5, 2008 at 10:07 pm said:
ဟီး..ဟိ.. နာအရင်ဆုံး comment ပေးရတယ်ကွ… 😀
လေးမနဲ့တူသော လူသားလေး??? တကယ်ပြောတာလား..
လေးမက ငွေဆောင်ကိုခဏခဏ သွားရတာပဲ.. ပျော်စရာကြီး။ အမလည်း သွားချင်တယ်။ အမကတော့ မြန်မာပြည်က beach တွေကို ကြိုက်တယ်။ ဘယ်နှစ်ခါပဲ သွားရ သွားရ ရိုးသွားတယ်လို့ မရှိဘူး။ အခုရော မျက်မှန်နဲ့ပဲများတဲ့ပုံရိုက်လာသေးလား.. ?? 😛
ယောင်းမ, on April 5, 2008 at 10:51 pm said:
ရိုးရိုးအပျော်ခရီးလေးမှာ အတိတ် နဲ့ အနာဂတ် ကူးယှက်လို့ …… ဖတ်ရတာ လွမ်းသလိုလို ပျော်သလိုလိုပဲ ။ ယောင်းမရေးလိုက်ရင် ဒီလိုမျိုးတွေ များတယ်နော် ။ ဒီတစ်ပုဒ်ရေးပုံ အတော်လေး စိတ်ကူးဆန်းတယ် ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ။ ပြီးတော့ ….. ရှက်ပြုံးလေးပဲ မြင်ပါတယ်ကွာ ။ နောက်တစ်ခေါက်ရောက်တဲ့အခါ ယောင်းမပုံတူလေးတွေလည်း ပါမှာကွ ။ ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကျောက်ဆောင်ကလည်း မျှော်နေကြမှာ ။
မင်းတို့ ငါတို့နဲ့ တူတဲ့ မိန်းကလေးက သူနဲ့တူတဲ့ လူသားလေးနဲ့ ပြန်လာတယ်ဝေး လို့ …. သူတို့ပျော်ကြမှာ ။
ဒီစာလေးဖတ်ကောင်းလို့ ကျေးဇူး ယောင်းမရယ် …
p.s မအားဘူးနော် … နောက်မှ ထပ်လာလည်မယ်ဟ …
soemoethu, on April 6, 2008 at 12:51 am said:
မမ..ရေအရေးအသားတွေကအရမ်းလန်းတယ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့လက်တွေ့ ဘဝကမိန်းကလေး..မင်းနဲ့ တူတဲ့နောက်ထပ်လူသားလေးနဲ့ ပြန်လာမဲ့လမ်းကိုပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေကမျှော်နေကြမှာပါ… nice post.. 🙂 🙂
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on April 6, 2008 at 3:16 am said:
မလေးမ .. စာတွေ မဖတ်ရတာ ကြာလို့ လွမ်းနေတာ.. ဘယ်လိုပုံ သဲအိမ်တွေ ဆောက်ခဲ့သေးလဲ ?း-)
ခရုတွေကို တကယ် ကောက်ဖြစ်သေးလား.. ဘာလုပ်ခဲ့လဲဟင်.. ခရုရှိတဲ့ ကမ်းခြေကို မရောက်ဖူးဘူး..
ပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပဲ . .
mtj, on April 6, 2008 at 6:54 am said:
စိတ်ကူးလေးကောင်းတယ် လေးမရေ။ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ လေးမ၊ ကိုကောင်းကင်နဲ့ လေးမ jr လေးတို့ ထပ်သွားရင် ပင်လယ်နဲ့ ကျောက်ဆောင် ဘာတွေပြောကြ မလဲ ဆိုတာ စောင့်ဖတ်မယ် 🙂
မောင်အညတရ, on April 6, 2008 at 8:21 am said:
ငွေဆောင်မှာ သွားကဲနေတာကိုး D; မနာလိုတာဗျာ
ဟီး….ဟီး …..နာတို့အတွက် ဘယ်မလဲ ခရုလက်ဆောင်……
အေးချမ်းသူ, on April 6, 2008 at 11:24 am said:
အရသာရှိရှိ ခံစားသွားတယ်။ သင်္ကြန်ရောက်ရင် ချောင်သာသွားလေ။ နောက်တစ်ခါ ကျောက်ဆောင်၊ ပင်လယ်နှင့် မိန်းကလေး ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာလေး ဖန်တီးခဲ့နော် 🙂
သားကြွက်, on April 6, 2008 at 12:58 pm said:
အမယ် အမယ် ဒါကြောင့် ငွေဆောင်က ပြန်လာလာချင်း ပို့ စ်အသစ်မတင်နိုင်တာကို ကောင်းကင်ကြီးကို ချိတ်ကောက်နေတယ်ပေါ့ 😛 ကမ်းခြေအဖြစ်ပျက်လေးကို ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းတယ် နောက်နှစ်တွေလည်း စိတ်ကောက်စရာတွေမကြုံရပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ ပင်လင်ကြီးနဲ့ကျောက်ဆောင်ကြီးမှာတဲ့အတိုင်း နောက်နှစ်မှာ လူသားလေး တစ်ဦး (နည်တယ် ) ၂ ဦး 😛 နဲ့သွားရောက် အပန်ဖြေနိုင်ပါစေ။
p.s ဘာမှလဲမပါဘူး တီကြွက် ကပ်စေးနှဲ ပေသီးတို့အစ်မ မပြောရဘူးး
မျှားပြာ, on April 7, 2008 at 1:33 am said:
လူသစ်လေးကို မျှောနေတယ်ဗျာ ..
THS, on April 8, 2008 at 2:01 am said:
“မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲ ..သိရခက်တယ် ..မာယာများတယ် …ပြောင်းလဲလွယ်တယ်”
အဆင်ပြေပါစေ အစ်မလေးမ ။ ။
မင်းကျန်စစ်, on April 8, 2008 at 8:12 am said:
စကားပြောကို လူနဲ့ မဟုတ်ပဲ အတိတ်တွေပါ မြင်လာအောင် ရေးတတ်တဲ့ ငါ့အမ သိပ်တော်တာပဲ။
လှိုင်းတွေ ဖွက်ထားတဲ့ မျက်မှန်အစား ရေသဘင်မျက်မှန် အနက်ကြီး ဝယ်ပေးလိုက်မယ် 😀 နိုနဲ့ တစ်တစ်
အိမ်လေး, on April 8, 2008 at 1:39 pm said:
ဗိသုကာကျောင်းသူ အမလေးမရေ..း) မှာလိုက်တယ်နော် အမလေးမနဲ့တူတဲ့ နောက်ထပ် လူသားလေးတစ်ဦးကိုပါမျှော်နေမယ်တဲ့ဗျ…ဟိဟိ
သက်ဝေ, on April 9, 2008 at 11:38 am said:
အဲဒီပင်လယ်ကြီးက လူသားလေးတစ်ဦး ကိုကြိုဆိုသလို… ဘလော့ဂ်လောက က သူငယ်ချင်းလေးတွေကလဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
နွေကဗျာ, on April 16, 2008 at 10:47 pm said:
နောက်နှစ်တွေမှာ ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေဆီ အရောက်သွားပြီး
Yan, on April 18, 2008 at 10:40 am said:
ကောင်းတယ်ဗျာ. သိပ်ကောင်းတဲ့ အတွေးလေးတွေပဲ…
ဟန်သစ်ငြိမ်, on April 18, 2008 at 7:51 pm said:
ဂွတ်ရှယ်၊ ဂွတ်တယ်ဗျာ။ ဗာသုကိလို့ မပြောရဘူး။
မိုးချစ်သူ, on April 21, 2008 at 6:19 pm said:
မိန်း ကလေး နဲ့ တူတဲ့ လူသားလေး နဲ့ လာတဲ့ အခါ
ပင်လယ်…..ငါက သဲ လေးတွေပေါ်လှိုင်းလေးတွေ တင်ပေးမယ်
ကျောက်ဆောင် …….ငါက လှိုင်းကြိး တွေ မရိုက်ခတ်ရအောင်
မင်းနဲ့ ငါ ဒီတခါတော့ သူတို့ကို မျှော်ပုံချင်းတူကျမှာပါကွာ
ပျော်ရွှင် ပါစေ ချစ်မ……
lay-ma, on June 15, 2008 at 12:24 pm said:
>မနုစံ … လေးမနဲ့တူသော လူသားလေး??? တကယ်ပြောတာဟုတ်ဘူး… ချိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ …။ ငွေဆောင်ကိုခဏခဏ သွားတာဟုတ်ဘူး…။ ငပလီ ၂ ခါ .. ငွေဆောင် ၃ ခါ …။ ၂ ခုလုံး ပင်လယ်၁ ခုတည်းပဲ လေ.. ။ မျက်မှန်နဲ့ပဲများတဲ့ပုံရိုက်လာဘူး …။ ဦးထုပ်နဲ့… ပဲ … များလာတယ်…။
>ယောင်းမ … လေးမ လည်း လွမ်းသလိုလို .. ပျော်သလိုလို … ရေးလို့ ကောင်းလိုက်တာ ..။ ယောင်းမ က ရှက်ပြုံးလေးပဲ မြင်ပါတယ်ကွာ ဆိုတော့ ကျောက်ဆောင်ကြီး နဲ့အမြင်ချင်းတူတာ ပေါ့ ..။ မရဘူး … မအားလည်း လာရမှာပဲ …။
>စိုးမိုးသူ … ညီမရေ .. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့လက်တွေ့ ဘဝကမိန်းကလေး. က မျှော်နေမယ့် သတင်းစကားကြားရလို့ အရမ်းပျော်တယ်တဲ့ … သတင်းပေးတဲ့ စိုးမိုးလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ …။
>ရွှန်းမီ .. သဲအိမ် မဆောက်ခဲ့ ဘူး.. မီ လေးရေ ..။ ဓါတ်ပုံထဲက ခရုခွံတွေက လေးမ ကောက်ခဲ့တဲ့ ခရုတွေပါ …။ သိပ်တော့မလှ ဘူး… ။ ငပလီမှာ ပို လှတယ်…။ မီ … သွားရင် ငပလီ သွား..။
>ကိုအတာ … ဖတ်လို့ကောင်းမှာ ပေါ့ … ကို အတာကြီးလည်း စိတ်ကူးယဉ်နေတယ် မို့ လား …။ ကိုအတာ … ညီမလေး နဲ့ဘေဘီလေး တွေ ကမ်းခြေ သွားကြမယ်လို့အချည်ကြီး ကြံနေတာ မို့ လား… သိတယ်နော…။ 😛
>ကိုအညတရ … မနာလို ရှိနဲ့ … ခရုလက်ဆောင် …ပုံတင်ပေးထားတယ်… ယူသွားနော်…။
>အေးချမ်းသူ … သိုးလေးရေ… ချောင်းသာတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး… သင်္ကြန်တွင်းဆို လူ သိပ်များတယ် ပြောတယ်…။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ရင် ပြောမယ်နော်…။
>သားကြွက်… မောင်လေး ထင်တာ လွဲပါတယ်ကွယ် …။ ချိတ်ကောက်နေရင် ပို့ စ် ပို ရေးဖြစ်တယ်… ခုက ပြေလည်နေလို့ကွန် ပြုတာ နား မကပ်တာလေ.. ဟဲ…ဟဲ …။ ပေသီး တို့ အစ်မ ဆိုပေမယ့် ခရုခွံတော့ ပေးနိုင်ပါတယ်ကွယ်။။။
>မျှားပြာ … ပြာပြာ ပြာပြာ နဲ့ရိုက်သွားတာ … မျှော နေတယ်တဲ့ …။ မျှော်နေတယ် လုပ်ပါ ပြာယာခတ်ရယ်…။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
>တင့်ထူး … heart ထိနေတဲ့ အခါသမယ ဆိုတော့ ထိသွားတဲ့ စာသားလေးတွေ ဟိုင်းလိုက် လုပ်သွားတာ မို့ လား…။
>ကျန်စစ် … ဂယ်ပြောတာလား… ဂယ် ၀ယ်ပေးမှာလား … ဗုံးငွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေလဲ သိဘူး… တိုင်လိုက်ဦးမယ်…။
>အိမ်လေး .. ဟုတ်လား … မှာ လိုက်လား …။ ပါလာရင် ပြောမယ်လို့ပြောလိုက်ပါနော်…။
>မသက်ဝေ … ကြို ဆို တယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကြို ဆိုဖို့အချိန် မရောက်သေးပါဘူးရှင် ။။။
>နွေ ရေ … အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော် … နွေ.. ပေးတဲ့ ဆုကို လည်း ပြည့် ချင်ပါတယ် ..။
မင်းနဲ့ ငါ … အားပေးပုံချင်း မတူပါဘူးကွာ…။
ဟတ်..ဟတ် … ကိုရန်အောင် ရေ … သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….။
>ကိုဟန်သစ် … ဗာသုကိသီးစား … အာချီ လိမ်းပြီး ဘွဲ့ ရလာတာပဲ … ဂလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ ..။ ခွိ.. ခွိ …။
စုန်းမလေး ဖြည့် စွက်သွားတဲ့ စာသားလေးတွေ ဖတ်ပြီး ချစ်မ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးမိတယ်..။ ကျေးဇူးပါ .. စုန်းမလေး…။